Linus Torvalds waxaa ku jiri doona dm-clone oo loogu talagalay Linux laanta kernel 5.4 | Laga soo bilaabo Linux
Dhawaan warka ayaa la sii daayay in abuuraha kernel Linux, "Linus Torvalds" ayaa laga aqbalay laanta xudunta (iyada oo ku saleysan nooca 5.4 la sameeyay) hirgelinta moduleka dm-clone iyada oo hirgelinta kantaroole cusub ku saleysan Qalabka-Mapper.
Hindisahan cusub loogu talagalay kernel Linux kuu oggolaan doonaa inaad clone aalad block jira. Module wuxuu oggol yahay abuuritaanka nuqul maxalli ah oo ku saleysan on qalab block-akhris-kaliya in loo qori karaa inta lagu guda jiro hawsha cloning ah.
Sida codsi caadi ah moodeelka la soo bandhigay ee Linux Kernel "Dm-clone" waxaa loola jeedaa isku xirnaanta shabakadaha qalabka feylasha fog ee qaabka aqrinta kaliya iyo ka shaqeynta I / O dib u dhac dheer, aalad maxalli ah oo dhakhso leh oo taageerta duubista iyo ka shaqeynta codsiyada daahitaannada ugu yar.
Iyada oo leh waxay siisaa awood u leh inaad ku dhejiso qalabka cloned oo aad bilowdo isla markiiba abuuristeeda kadib, adigoon sugin howsha wareejinta xogta si ay udhameyso.
Halka dhinaca kale nuqul ka mid ah macluumaadka uu ku sii socon doono asalka, oo ay barbar socdaan soo gelinta / soosaarka la soo saaray markii la adeegsanayo qalab cusub.
Kiiska ugu weyn ee loo adeegsado dm-clone waa in lagu duudubo daahitaan suurtagal ah oo fog, oo ah aaladda akhriska oo keliya nooca qufulka qalabka aaladda aasaasiga ah ee qorista.
Tusaale ahaan dm-clone waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo celiyo keydadka keydinta ee ku lifaaqan shabakadda laga helo hab maamuuska sida NBD, Fiber Channel, iSCSI iyo AoE oo ku saabsan keydinta maxalliga ah ee ku saleysan SSD ama NVMe.
Koodhka dm-clone waxaa loo habeeyay qoraal yar oo aan kala sooc lahayn oo cabirkiisu u dhigmaa cabbirka baloogga (4K ahaan)
Inta lagu gudajiro hawsha cloning, aqrinta codsiyada waxay kuu horseedi doontaa codsi toos ah oo xog ah oo ku saabsan aaladda cloned iyo qor codsiyada saameynaya aagagga aan wali la iswaafaqin dib ayey udhacayaan ilaa rarka aan la qorsheysan ee baloogyada la codsaday la dhammeeyo baloogyada la xidhiidha isla markiiba waxay bilaabaan).
Jaangooyooyinkii laga saaray hawlgalkii "tuurista" ayaa laga reebay habka nuqul (ka dib markii la sii buuxiyo, isticmaaluhu wuxuu fulin karaa "fstrim / mnt / cloned-fs" si looga fogaado inuu nuqulo baloogyada aan lagu isticmaalin FS).
Macluumaad wixii ku saabsan isbeddelada iyo xogta ku saabsan baloogyada la rakibo waxaa lagu keydiyaa miis metadata maxalli ah oo gaar ah.
Ka dib marka cloning la dhammeeyo, isticmaaluhu wuxuu helaa nuqul buuxa oo ah qalabka isha, oo ka tarjumaya dhammaan isbeddelada la sameeyay tan iyo bilowgii cloning.
Miis leh metadata clone ayaa la tuuri karaa ka dib isku dheelitirka adoo ku beddelaya miis xariijimo ah oo si toos ah uga tarjumaya xogta qalab cusub.
Farqiga ugu muhiimsan ee ka imanaya Unionfs iyo OverlayFS xalalka ku saleysan ayaa ah in dm-clone uu ka shaqeeyo heerka qalabka aaladda, iyadoon loo eegin nidaamka feylasha ee loo adeegsaday aaladdan, wuxuuna sameeyaa nuqul dhammaystiran oo ah aaladda isha laga helo mana soo rogo lakab dheeri ah. waa lagu raad joogaa.
Si ka duwan dm-mirror, moduleka dm-clone waxaa asal ahaan loogu talagalay inuu la shaqeeyo kaliya qaybta asalka ah ee qaabka aqrinta kaliya, iyada oo aan loo turjumin howlaha qorista.
Sawirka dm-snapshot, nuqul buuxa lama abuurin oo nuqulka asalka ah lama taageerin. Gudaha dm-cache, nuqul buuxa lama abuurin, howlaha qorida waa la gudbinayaa, shaqadana waxaa loo dhimay hits kaydinta. Waxqabadka ugu dhow waa dm-dhuuban.
dm-clone wuxuu adeegsadaa dm-kcopyd si uu u nuqulo qaybo ka mid ah aaladda isha illaa aaladda bartilmaameedka. Markii hore, nuqul codsiyada ah cabir u dhigma cabirka gobolka ayaa la soo saaraa.
Fariin 'hydration_batch_size <#regions> `` ayaa loo isticmaali karaa in lagu hagaajiyo cabirka codsiyada koobiga. Kordhinta cabbirka baaxadda dheecaanka waxay keenaysaa dm-clone oo isku dayaya in la isu geeyo gobollada isku-dhafan, sidaa darteed waxaan nuqul ka koobnaa xogta gobolladaas badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Linus Torvalds waxaa ku jiri doona dm-clone oo loogu talagalay laanta Linux Kernel 5.4
Microsoft ayaa koodhka ka soo saartay hirgelintiisa STL, maktabadda heerka C ++